Palo Rosso Oo Daboolka Ka Qaaday In Lionel Messi Uu U Ooyay Sida Canug Yar Ee Waayay Hooyadiis, Kadib Guuldarada Finalkii Copa America Ee 2016. – GOOL24.NET
Palo Rosso Oo Daboolka Ka Qaaday In Lionel Messi Uu U Ooyay Sida Canug Yar Ee Waayay Hooyadiis, Kadib Guuldarada Finalkii Copa America Ee 2016.
Palo Rosso oo ahaa caawiyaha macalinkii hore xulka qaranka Argantina Gerardo Martino ayaa dib u xasuustay xaaladii adkayd uu galay Lionel Messi iyo sida uu u ooyay kadib markii xulka qaranka Argantina ay ku guuldareysteen Copa America laba sano ka hor, isagoo Palo Rosso ku tilmaamay sida uu xiligaas ahaa Messi, sida canug yar ee waayay hooyadiis.
Caawiyiha macalinkii hore ee xulka qaranka Argantina ee Gerardo Martino ayaa wareysi uu dhawaan bixiyay wuxuu kaga warbixiyay: “Qolka labiska ee xulka qaranka Argentina ka dib guuldaradii finalkii Copa America 2016, waxaa ka jiray xanuun aad u daran, laakiin waxa ku dhacay Messi waa kii ugu xumaa, wuxuu u ooyay sidii cunug ay ka luntay hooyadiis”.
Palo Rosso ayaa wuxuu hadalkiisa intaas kusii daray: “Waxaan arkay isaga oo kaligiis fadhiya oo ooyaya, way adagtahay in la arko xidig sida Lionel Messi oo kale ee xaaladan ku jira, ma aanan lahayn awood aan isaga dartiis wax ugu sameeyo aan ka ahayn in aan laabta galiyay”.
Lionel Messi ayaa la arkayay inuu oohin la fariistay kadib markii ay guuldaro kala kulmeen finalkii Copa America xulka qaranka Chile oo koobka ku qaaday rigoodhe yaal, guuldradan ayaa waxay ku noqotay laacibka kooxda Barcelona dharbaaxi xoogan, wuxuuna si deg deg ah ugu dhawaaqay xiligaas inuu isaga fariistay ciyaaraha caalamiga ah.
Si kastaba Messi ayaa doonayay inuu dalkiisa kula guuleysto koob, kadib markii aysan ku guuleysan in mudo ah, laakiin ugu dambeyn fursadii soo martay ma uusan ka faa’ideysan si uu sidaas u sameeyo, kadib markii uu ku guuldareestay laba jeer ee xidhiidh ah finalka Copa America, waxaana kaga guuleestay isla hal xul oo kaliya, taasoo saameyn xoogan ku reebtay Messi.
Waxay ahayd markii labaad ay kaamirooyinka qabteen Lionel Messi oo ilmeenaya, waxayna markii ugu horeesay uu sidaan oo kale Messi u ilmeeyo ahayd, kulankii ay guuldarada kala kulmeen tartanka Champions League kooxda Chelsea sanadii 2012, taasoo uu horey kaga sheekeeyay Alexis Sanchez.